XOG CUSUB: Khilaafka wiiqay dhismaha maamulka Galmudug oo aad u sii fogaaday (Maxaa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Khilaafka wiiqay dhismaha maamulka Galmudug oo aad u sii fogaaday...
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in uu xoogeystay khilaafka wiiqay geedi socodka Doorashada Baarlamaanka Galmudug.
Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay bilaabeen inay qaarkood dhaliilaan qorshaha uu Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre u jooggo Magaalada Dhuusamareeb.
Nabadoon Maxamed Xaashi oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka 2aad ee Galmudug ayaa Ra’iisal Wasaaraha ku eedeeyay in uu fashil ku hoggaaminayo dhismaha Galmudug loo dhan yahay.
Nabadoon Maxamed Xaashi oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha ayaa tilmaamay in Ra’iisal Wasaaraha iyo kooxdiisaba ay doonayaan inay dhisaan Galmudug hoos-tagta Villa Soomaaliya, isla-markaana aanay doonayn Galmudug matasha dadka deegaanka.
Qaylo-dhaanta Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay salka ku haysaa in la bedelay inta badan saxiixe-yaashii Galmudug ee 2015, iyadoona lagu soo bedelay kuwo ka shaqaynaya danaha Villa Somalia iyo inay Villa Soomaaliya ku hawlan tahay, sidii ay Odayaasha Dhaqanka uga saxiixan laheyd liiska Xildhibaano ay wadato.
Nabadoon Cabdullaahi Daahir Maxamed ayaa Madaxda Dowladda ku eedeeyay inay bohol ku tuurayaan Galmudug, isla-markaana aanay doonayn in reer Galmudug loo yegleelo maamul ay ku qanacsan yihiin.
Odayaal kale oo uu ka mid yahay Nabadoon Cabdi Cali Guure ayaa Odayaasha Dhaqanka ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada cusub uga digay inay saxiixaan liiska ay ku qoran yihiin magacyada shakhsiyaadka ay soo xushay Villa Soomaaliya.
Odayaasha Dhaqanka qaarkood ayaa waxay Magaalada Dhuusamareeb ka wadaan kulamo aad mooddo inay liddi ku yihiin socdaalka Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre ee Dhuusamareeb, oo markii hore lagu sheegay mid lagu dardar-gelinayo dhismaha maamulkan.
Ka dib markii Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) uu ka horyimid dhabaha loo marayo dhismaha Galmudug ayaa waxaad mooddaa inay kicisay dareenka Odayaasaha Dhaqanka.
General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan Xafiiska Madaxtooyada Galmudug ayaa sheegay in Madaxweyne Xaaf la’aantii ay dowladdu ku adkaan doonto inay soo dhisto Galmudug loo dhan yahay.
Musharax Cabdiraxmaan Tuuryare oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa ka dhawaajiyay in Madaxweyne Xaaf uu weli yahay Madaxweynaha Galmudug, isla-markaana uu sii ahaan doono illaa iyo inta laga soo dooranayo Madaxweynaha xigga.
General Tuuryare ayaa intaa ku daray in Xaaf uu weli leeyahay miisaan siyaasadeed, isla-markaana uu kasban karo dadka ay ka go’do siyaasadda Galmudug qaarkood, balse uu ku talin lahaa inay dowladdu xaliso tabashada uu ninka odayga ahi qabo.
Isku soo wada-duub, Khilaafka wiiqay doorashada ka socota Magaalada Dhuusamareeb oo marba heer taagnaa ayaa waxaad arki kartaa inuu gaaray heerkii ugu sareysay, waxaana laga cabsi qabaa inuu fashil ku yimaado doorashada, haddii aanay dowladdu la shaqayn dadka deegaanka.
Khilaafka wiiqay dhismaha maamulka Galmudug oo sii fogaaday